Banyere Anyị - Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa, nke Quanzhou Hongda Machinery Co., Ltd.
E guzobere HONGDA na 1990, nke dị na Quanzhou, obodo ama ama nke ndị China esenidụt, nwere ogologo akụkọ ihe mere eme, akụ na ụba na-aga nke ọma na gburugburu ebe mara mma. Fujian jinjia Machiery Co., Ltd bụ enyemaka Hongda. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 1990, mgbe afọ iri nke mbọ gasịrị, ugbu a bụ azụmahịa na -eduga nke ukwuu na igwe injinia nwere ọtụtụ ihe ndị dị n'okpuru ime na track roller, carrier. roller, sprocket, traler na track trains na akara akpụkpọ ụkwụ na ezigbo aha.
Ezi mma bụ omenala ochie nke ụlọ ọrụ anyị .Ọ na -abụrịrị iwu na atụmatụ ọrụ anyị 'iji mee ihe zuru oke nke ọma wee nweta afọ ojuju 100%'. Ya mere, ewebatala akụrụngwa dị elu, a na -ewepụta talent dị mma ma na -azụkwa mkpara mgbe niile maka ịdị mma. Ihe ndị a niile na -ekwe nkwa ịdị mma nke ngwaahịa anyị ma weta aha ọma n'etiti ndị ahịa anyị, nke na -enye ntọala siri ike maka imekọ ihe ọnụ anyị.
Enwekwara nkwanye ugwu dị ukwuu na ire ahịa na ọrụ ịre ahịa, e guzobela netwọk zuru oke maka ịre ahịa na ọrụ n'ahịa mpaghara yana Japan, Korea, USA, Canada, EU, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Middler Asia mba iji nye ndị ahịa ụlọ na mba ofesi ọrụ dị mma, ngwa ngwa na zuru oke.
Anyị, dị ka anyị na -eme mgbe niile, ga -eme ike anyị niile iji gboo mkpa gị.